Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo $100,000 oo dollar ku wareejiyey Hay'adda PSAWEN | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo $100,000 oo dollar ku wareejiyey Hay’adda PSAWEN
GAROOWE – Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar(Camey) ayaa maanta ku wareejiyey lacag dhan 100,000 dollar hay’adda biyaha,Tamara iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Puntland PSAWEN.
Lacagtan ayaa loogu talagalay in lagaga qeybqaato gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen ee ku teedsan deegaanada Puntland.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Camey ayaa sheegay in lacagta ay ahayd 150,000 oo dollar oo Puntland kasoo gaartay guddiga gurmadka abaaraha dawladda Federaalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in guddiga Abaaraha Puntland $50,000 oo dollar oo kamid ah lacagta ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha gobolka Mudug halka $100,000 ee soo hartayna uu maanta ku wareejiyey hay’adda PSAWEN.
Sidoo kale sheegay in lacagta ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug ay ku amreen in lasiiyo raashin oo keliya, si loogu gargaaro ummadda Soomaliyeed ee ku soo hayaantay degaanada gobolkaasi, halka $100,000 uu maanta ku wareejiyey hay’adda PSAWEN lagu soo iibin doono Lix booyadood oo wax weyn ka tarri doona gurmadka loo fidinaayo dadka abaartu waxyeelaysay.
Madaxweyne kuxigeenka ayaa sheegay in ay cid walba oo lacag ama gargaar loogu dhiibo dadka abaaruhu sameeyeen ay kula xisaab tami doonaan, si ay ummaada Soomaliyeed u aragta uguna cadaato shaqo walba oo looqabanaayo shacabka abaartu waxyeelaysay.
Wuxuu kaloo sheegay in ay Puntland ku sugan yihiin kuna soo hayaameen shacab Soomaaliyeed oo ka kala yimi Waqiiyiga, Koonfurta iyo Galbedka Soomaliya iyo sidoo kale Soomalida Dawladd Degaanka Itoobiya, isla markaana loobahan yahay in il gaara lagu eego dadkaasi sidii loola tacaalilahaa xaladooda mid caafimaad iyo mid dhuuni-ba.